Subdomain, SEO ary valin'ny orinasa | Martech Zone
Subdomain, SEO ary valin'ny orinasa
Sabotsy, Desambra 10, 2011 Alakamisy, Septambra 1, 2016 Douglas Karr
Ity misy lohahevitra SEO iray tena mampihetsi-po (izay nihaona tamiko indray tamin'ity herinandro ity): Subdomains.
Mpanolo-tsaina SEO maro no mankahala subdomain. Tian'izy ireo amin'ny toerana milamina ny zava-drehetra mba hahafahan'izy ireo manao fampiroboroboana ivelan'ny tranokala mora foana ary mifantoka amin'ny fahazoana fahefana bebe kokoa an'io sehatra io. Raha manana domains maro ny tranokalanao dia mampitombo ny asa raisiny io. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha hiloka ianao… tian'izy ireo hiloka amin'ny tanana iray ianao. Ity ny olana… indraindray dia misy dikany tanteraka ny fametahana subdomain ny tranokalanao.
Raha ny marina, ny sasany amin'ireo fananana tafarina amin'ny lazan'i Google malaza Fanavaozana ny Panda nivadika subdomain. Iray amin'ireo tranonkala ireo Hubpages. mampiasa Semrush, nandinika ny isan'ny teny lakile izay nalahatr'i Hubpages taloha sy taorian'ny nahavitan'ny Panda sy ny fifindran'izy ireo tany amin'ny subdomain.
Raha apetrakao daholo ny teny fanalahidy marika, ny laharana voalohany amin'ny Hubpages dia izao amin'ny fangatahana miorina amin'ny teny lakile daholo! Ireto misy adihevitra vitsivitsy momba azy:
Hoy i Google hoe "Avelao hiroborobo ny subdomain TRILLIONION"
Ny Panda Fix avy amin'ny Hubpages
Subdomain: Tsy mivoaka ao amin'ny fandevenana Google Panda ny Hubpages?
Sendra nahita olona nifanakalo hevitra momba izany ve ianao? ny fihenan'ny fiovam or valin'ny orinasa? Eny… izaho koa.
Tsy momba ny fiompiana atiny sy ny Panda ihany izany. Ny zana-tany dia mamela ny fisarahana mahomby amin'ny tranokalanao, manome mazava sy mifantoka amin'ny atiny ao. Rehefa manapaka sy manadino ny tranokalanao ho subdomain ianao dia ianao dia angamba mahazo laharana amin'ny laharana rehefa mamindra atiny ianao ary mila mamily lalana ny fifamoivoizana. Nefa amin'ny farany, azo inoana fa hanao izany ianao mahazo toerana tsara kokoa amin'ny teny lakile mifandraika, mitondra fiara fifamoivoizana bebe kokoa mora kokoa amin'ny alàlan'ny tranokalanao, ary manome traikefa mpampiasa kendrena kokoa izay mampizara fizarana ny mpamaky anao amin'ny fomba mahomby sy manatsara ny tahan'ny fiovam-po.
Ny subdomain dia tsy ratsy amin'ny SEO, mety hahafinaritra ho azy ireo izany… raha mino ianao fa mahazo ny SEO valin'ny orinasa. Saingy amin'ny fampiharana subdomain dia fantatry ny mpanolo-tsaina SEO fa manaparitaka ny làlan-kaleha izy ireo. Ka… handray fanapahan-kevitra ahazoana valiny haingana na ho tsara kokoa ve izy ireo avy eo? Raha maniry handoa karama hatrany izy ireo, dia mety hizotra amin'ny lalana mora.
Ny mikendry dia tetikady marketing mahomby izay tsy ampiasaina firy amin'ny sehatry ny indostria. Hitanay ny rivotry ny fiovana, na izany aza. Fantatr'i Google fa ny atiny tena voadinika sy voadinika dia lakilen'ny tetika lehibe… io no nananganana ny motera fikarohana azy ireo. Ny fanitsiana algorithm 600 fanampiny ataon'izy ireo isan-taona dia manampy amin'ny fanohizana izany fifantohana izany.
Ka maninona no hanao zavatra izay tsy mankeny votoaty kendrena sy fifandraisan'ny mpampiasa?
Ohatra iray hafa ny fanafihana ny an-tsary izay manana tsy misy mihitsy ifandraisany amin'ny orinasa tena izy. Ny bandy SEO dia tia infographic lehibe satria ho lasa viral ary ny orinasa dia hahazo backlinks an-taonina ary hampitombo ny laharana sy ny fivezivezena izy ireo.
Ankehitriny dia manana fifamoivoizana an-taonina maro ianao izay tsy mamadika. Miakatra ny tahan'ny fihenam-bidy, mihena ny fiovam-po… fa tsara toerana kokoa ianao - indrindra amin'ny fehezan-teny tsy misy ifandraisany amin'ny orinasanao.
Raha ny fahitako azy dia marina ianao simba ny fahefan'ny motera fikarohana sy ny fanatsarana anao satria nampisafotofoto ny motera fikarohana ianao mba hieritreretana ny tranokalanao mety ho zavatra tsy izy. Aleoko kokoa mandray fandraisana an-tsokosoko miaraka amina infographic manokana ho an'ny indostria toy izay infographic viral izay tsy misy ifandraisany. Fa maninona satria mifantoka amin'ny fahefako sy ny lazako eo amin'ny sehatry ny indostria izany. Ny tranonkala kendrena dia hihoatra ny ankapobeny… ary tsy hiditra amin'ny fiatraikany ara-tsosialin'ny vondrom-piarahamonina tery aza aho.
Raha manana lohahevitra isan-karazany mety tsy misy ifandraisany mivantana ny mpanjifako dia aleoko manome torohevitra azy ireo hifindra any amin'ny subdomain, handray ilay izy ary hanangana paikady mifantoka be indrindra mifototra amin'ny indostria, ny vokatra ary ny serivisy. Raha ny laharana sy ny fifamoivoizana no tadiavinao dia mety pariah ny subdomains. Fa raha manenjika ianao valin'ny orinasa, mety te hijery indray ianao.
Ireo ao amin'ny indostria miasa amin'ny fampivoarana ny mpanjifa dia mahatakatra ny anjara asan'izy ireo. Azonao atao ny manome fotoana hafa ny subdomains.
Tags: raharaham-barotravalin'ny orinasasehatraSEOsubdomain seosubdomains